James Duddrige: Waxaan dib u Qiimeyn Ku Sameyn Doonaa Xiriirkeenna Soomaaliya – Goobjoog News
Xil Duddrige ayaa sheegay in UK ay ka walaacsan tahay mudda kordhinta Golaha Shacabka u sameeyeen Farmaajo.
“Waxaan aad uga xunahay go’aankii Aqalka Hoose ee Baarlamaanka Soomaaliya uu labo sano ugu kordhiyay Maxamed Farmaajo xilka Madaxweynaha iyo kan Baarlamaanka Soomaaliya. Tani xal uma ahan culeysyada joogtada ah ee saaran hanaanka doorashada, laakiin taa badalkeeda waa talaabo hoos u dhigeysa kalsoonida lagu qabo hogaaminta Soomaaliya isla markaana qatar ku ah badbaadada iyo mustaqbalka dadka Soomaaliyeed.” ayaa lagu yiri qoraal uu soo saaray Wasiirkii Hore ee Africa James Duddrige .
Duddrige ayaa intaas hadalkiisa sii raaciyay “Waxaan si isdaba joog ah uga soo horjeednay dadaal kasta oo horseed u noqda geeddi-socod is barbar socda, doorasho qayb ah ama kordhinta muddooyinkii hore. Waxaan ka codsaneynaa madaxda Soomaaliya inay ka waantoobaan ficil kasta oo dheeri ah oo kali ah oo kicin kara xiisadaha siyaasadeed ama rabshadaha. Waa muhiim in dhammaan dhinacyada ay isdajiyaan oo ay ilaaliyaan xasilloonida iyo amniga Soomaaliya.”
Qoraal ka soo baxay Xildhibaanka ayaa waxa lagu sheegay in hergelinta Heshiiskii 17 September ay laf dhabar u tahay xasiloonida dalka.
“Wadahadalka wax ku oolka ah ee u dhexeeya madaxda Soomaalida ayaa lafdhabar u ah xaqiijinta dhaqan gelinta heshiiskii 17kii Sebtember ee qaabka doorashada. Heshiiskaasi waa aasaaska kaliya ee sharciyeysan ee doorashooyinka. Hadda waxaa la joogaa xilligii madaxda Soomaaliya ay eegi lahaayeen wixii ka baxsan danaha gaarka ah ee gaarka ah oo ay dhowraan mas’uuliyadda ka saaran dadka Soomaaliyeed. Waxaan ka codsaneynaa madaxda Soomaaliya in ay si deg deg ah ugu laabtaan wadahadalada si loo helo xalal wax ku ool ah isla markaana heshiis looga gaaro arrimaha harsan, iyadoo la muujinayo is xakameyn iyo tanaasul.”
“Maaddaama uusan jirin is-afgarad horseedaya doorasho loo wada dhan yahay oo lagu kalsoonaan karo in la qabto iyada oo aan dib loo dhigin, xiriirka bulshada caalamka iyo hoggaanka Soomaaliya ayaa is beddelaya. Boqortooyada Midowday (UK) waxay lashaqeyn doontaa saaxiibadeeda caalamiga ah qaab mideysan oo dib loogu qiimeeyo xiriirkeena iyo nooca caawinaada aan siino Soomaaliya.”
Mareykanka Oo Ku Hanjabay Dib U Eegista Xiriirka , Cunaqabateyn iyo Hakinta Safarada